तपाईंको आजको दिन राशिफल – Horoscope – Radio Prabhav 92.4 Mhz
June 23, 2019 गृहपुष्ठ
तपाईंको आजको दिन राशिफल – Horoscope
वि.सं. २०७६ असार ८। आइतबार। इ.स. २०१९ जुन २३। ने.सं. ११३९ तछलागा। आषाढ कृष्णपक्ष। षष्ठी, २१:३१ उप्रान्त सप्तमी। सूर्योदय– ५:११ बजे, सूर्यास्त– १९:०१ बजे चन्द्रराशि– कुम्भ।
गरेका कामबाट तत्काल फाइदा उठाउन मुस्किलै पर्नेछ। सानातिना काममै अल्झनुपर्दा लक्ष्य प्राप्त नहुन सक्छ। हिसाबकिताबमा होसियार रहनुहोला। हडबडको त्रुटिले काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। स्वास्थ्य कमजोर हुनाले आँटेको काममा बाधा हुन सक्छ। अध्ययनमा त्यति समय दिन नसकिएला। पछि फाइदा दिने काम सम्पादन गर्न सकिनेछ।
आश्वासन बाँड्नेहरूले व्यवहारमा झुक्याउन सक्छन्। प्रयत्न गरेका काम बिस्तारै सम्पादन हुनेछन्। महत्त्वाकांक्षी योजना गोप्य राख्नुहोला। नयाँ काममा योजना बनाएर अघि बढ्दा फाइदा हुनेछ। बलजफ्ती गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। अप्ठ्यारो पर्दा शुभचिन्तकहरूले मात्र साथ दिनेछन्। ईर्ष्या गर्नेहरूले सताए पनि अन्त्यमा स्थिति अनुकूल हुनाले फाइदै हुनेछ।
अवसरक लागि केही संघर्ष हुन सक्छ। छिमेकमा असमझदारी बढ्ने देखिएकाले होसियार रहनुहोला। फाइदाका लागि केही वस्तु त्याग्नुपर्ला। बाध्यतामा अलमलिनुपर्दा चिताएको काममा बाधा आउनेछ। विवादास्पद जिम्मेवारी आउन सक्छन्। आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउनेछन् भने सहयोगीहरू पछि हट्नेछन्। नयाँ काममा हात हाल्नुअघि विचार पुर्याउनुहोला।
कमजोर मानिएको अफगानिस्तानविरुद्ध भारतको संघर्षपूर्ण जित, न्युजिल्याण्ड शीर्ष स्थानमा